Ozi - Count gụda alaeze
Pedro - Ụmụaka m dara ogbenye ga-agụ agụụ
…for the Food of Truth.
Gisella - Mkpagbu ga-adị mma
…when they decide to unify the religions.
Valeria - Ụwa gị aghọwo ala Setan
N'oge na-adịghị anya ihe niile ga-emezu…
Pedro – Apụla na Nzukọ-nsọ
Ndị ọzụzụ atụrụ ọjọọ ga-anakwere ihe bụbu ọchịchịrị.
Ọnụ ego ndị ahụ (emelitere Jenụwarị 14, 2022)
Mahadum Columbia: ọnwụ site jab 20 ugboro karịa - 400,000 na US
Jennifer - Ugwu Ga-Bilie
Iswa na-aza nmehie gi…
…ugbua kwụsị ịbụ asịrị.
Ihe ị ga-eme mgbe ị na-efunahụ ihe niile…
Pedro - ịgbachi nkịtị na-ewusi ndị iro nke Chineke ike
Nyenụ ike gị niile iji gbachitere eziokwu.
Ị bụrụla mmadụ gbara ọchịchịrị nke na-eguzosi ike n'ihe na-adịghị n'etiti…
1 2 3 4 5 6 ... 113 Next »